‘Uzilengisile egconwa ngokuphinda ikilasi’ | Isolezwe
‘Uzilengisile egconwa ngokuphinda ikilasi’
Isolezwe / 16 January 2013, 2:01pm /
UNKSZ Gugu Gumede oshone ngokuzilengisa esihlahleni
USASHAQEKILE umndeni wentombazane yakwaDabeka eThekwini ezilengise ngoMsombuluko ngenxa yokudinwa ngabangani bayo abebeyigcona ngokuthi izophinda ikilasi, njengoba izikole zivulwa namuhla.
UGugulethu Gumede (16) ufeyile uGrade 11 ngonyaka owedlule eSithokozile Secondary KwaDabeka.
Utholwe wunina, uNksz Ntombifuthi Khumalo, elenga esihlahleni esisegcekeni kubo ngoMsombuluko ntambama.
Umufi kuthiwa ubegconwa ngontanga yakhe baze bathi kufanele ayocela ukwedluliselwa phambili esikoleni.
Unina kamufi uthe wethuke woma ngesikhathi ethola indodakazi yakhe ilenga ekubeni ekuseni eyishiye iphila futhi ingenazo izinkomba zokuthi khona okuyixakile emphefumulweni.
“Ngesikhathi ngifika ngibuya emsebenzini ngithole ukuthi endlini kubiliswe amanzi ngebhodwe kanti phezu kwetafula (uGugulethu) ubebeke ubhontshisi abelungiselela ukuwupheka. Ngimemeze yonke indawo ngimcinga kodwa lutho ukumthola.
“Ngibe sengibona into emnyamana ezihlahleni ngazitshela ukuthi wuplasitiki kadoti ophoswe ngumakhelwane.
“Ngiya khona-nje ngiyobheka ukuthi yini lena ngiyathetha ngoba bengicabanga ukuthi khona umakhelwane ovele waphosa udoti wakwakhe emzini wami,” kusho uNksz Khumalo osebenzisa isibongo sakubo yize eshadele kwaGumede.
Uthe uvele wathi khimilili uma ebona ukuthi akuwona uplasitiki kodwa wumuntu lona olenga esihlahleni. Ngesikhathi ebhekisisa ebona ukuthi yindodakazi yakhe, kuhlwe emini, amehlo agcwala inkungu.
Uthe ngesikhathi sekufike namaphoyisa nomakhelwane yize eyikhuthuze amaphakethe indodakazi bebheka ukuthi ayishiyanga ncwadi kodwa akutholakalanga lutho kanti kunzima ukwazi ngqo isizathu sokuthi yenze lokhu.
“Kumphathe kabi ukungaphumeleli esikoleni kangangoba uke wezwakalisa ukungajabuli ngokuthi kuphase umfowabo uMzomuhle abebefunda naye ekilasini elilodwa kodwa yena wasala. Besithi sizozwa kothisha esikoleni ukuthi ngeke yini edluliselwe phambili ngoba imiphumela yakhe ibingemibi ngaleyo ndlela elahlisa ithemba. Nakhu ingane isivele ifa kusenjena,” kusho uNksz Khumalo.
Umufi uzilengise ngebhayi le-ANC elinobuso bukaMengameli Jacob Zuma.
Yize uNkk Khumalo ekhomba ukuthi umntanakhe kungenzeka uzibulale ngenxa yokungaphasi esikoleni kodwa bekunamahemuhemu okuthi ubezoganiselwa “ikhehla” ebandleni abakhonza kulo KwaShembe, iNazareth Baptist Church.
Lokhu uNksz Khumalo ukuchithile wathi yindlela athukwa ngayo ngomakhelwane abangezwani nabo ngenxa yokuthi ingane yakhe ibiziphethe kahle futhi ingenangane ekubeni ezabo “sezishaya nga-three noma nga-four zisencane”.
Uze washaya ucingo eshayela isoka likamufi ukuthi liqinisekise ukuthi ubethandana nontanga yakhe, eyokuthi uzogana ikhehla yimbudane ebhebhethekiswa wumphakathi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCaptain Thulani Zwane, uthe kusaphenywa ukuthi umufi ushone kanjani.
Uthe akukho okusolisayo ngokufa kukaGugulethu okwamanje.